မိသားစုပဲကောင်းတယ် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ကျွန်တော်တို့ မိသားစုလေးမှာ ဖေဖေ ဦးမြင့်သာ၊ မေမေ ဒေါ်ဇီဇဝါ၊ မမ နှင်းနှင်းသာ နှင့် ကျွန်တော် လင်းထက်သာ ဆိုပြီး ရှိကြတယ်။ ဖေဖေနဲ့ မမက ထက်မြက်ကြတယ်။ အခု စလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ မေမေက ရိုးအေးတယ်၊ အေးဆေး တည်ငြိမ်တယ်။
ကျနော်က ဆိုးတယ်၊ တေတယ်။ ရန်ဖြစ်တယ်။ ဆယ်တန်းလည်း တစ်ဖုန်းဖုန်း ကျတယ်။ ဒီနှစ်တော့ အောင်တယ်။ ဒီလည်း ၁ လုံးပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက် တေလေပြီး အခုတော့ လိမ္မာသွားပြီ။ ရန်လည်း မဖြစ်တော့ဘူး။ အဲ့ဒါ မေမေ့ကြောင့်ပါ။ မေမေနဲ့ ကျွန်တော် လိုးနေကြပြီလေ။
အဲ့လို လိုးဖြစ်ဖို့ကို ပါးနှစ်ဖက်ရင်းပြီး ရယူခဲ့ရတာ။အမေ့ကို ပြောပြောချင်း ပါးကို အချခံရတော့တာပဲ။ ငိုလည်း ငိုတယ်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့ကို စာမေးပွဲ အောင်အောင် ဖြေရမယ်။ ရန်လည်း မဖြစ်ရဘူး။ မေမေ့ စကား နားထောင်ပြီး လိမ္မာမယ်ဆို လိုချင်တာ ပေးမယ်တဲ့လေ။ အထူးကြိုးစားခဲ့ရတာပေါ့။
အခု မေမေနဲ့ ကျွန်တော် လိုးနေတာ ၆ လ ကျော်လာပြီဗျ။ နည်းမျိုးစုံလည်း လိုးတယ်။ ခရေလည်း စမ်းသပ်ပြီးပြီ။ မေမေ သိပ်မခံနိုင်သေးလို့ အပေါက်ချဲ့ နေတုန်းဗျ။ မေမေလည်း စိတ်ပါလာပြီ။ စလိုးတုန်းကတော့ သုံးရက်လောက်ကို သူအနားကပ်မခံတော့တာ။ မူးမူးနဲ့ လိုးချလိုက်တာ ဖင်းပါကွဲသွားတယ်လေ။ လိုချင်တာဆို စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ရအောင် ယူတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ဒါက လွယ်လွယ်လေးပါဗျာ။
ဒီလို မေမေ့အပေါ် တဏှာစိတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာလည်း သီဟကြောင့်ဗျ။ သီဟ ဆိုတာ ကျွန်တော့် ဘော်ဒါအရင်း ဆိုးဖော်ဆိုးဖက် မွှေဖော်မွှေဖက်။ သူလည်း သူ့အမေနဲ့ လိုးနေကြတာပဲဗျ။ သူတို့သားအမိ ဖြစ်နေတာက ကြာနေပြီ။ သူ့အဖေက ဆုံးသွားတာ ကြာပြီ။ အခု သူက သူ့အစ်မကိုပါ လိုးပြီးလို့ အင်းစက် မိသားစုကိုတောင် ဖန်တီးနေပြီ။ ဗီဒီယိုလည်းရိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုပြတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းရော သုံးယောက်ရောရော သူ့အမေနဲ့ အစ်မ အဖုတ်တွေ အပြန်အလှန် ယက်ကြပွတ်ကြတာတွေရော။ ကျွန်တော်ကိုလည်း မြန်မြန်လှုပ်ရှားခိုင်းတယ်။ အမေချင်း၊ အစ်မချင်း လဲလိုးမယ်တဲ့လေ။ သူပြောတာတွေ ပြတာတွေ နားထောင်ပြီး ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်လည်း မေမေ့အပေါ် ဏှာစိတ်ခဲ့ရတာပဲ။
”ဟျောင့် လင်းထက် မင်းအမေအိုးကြီးက ကိတ်တယ်နော် လုံးနေတာပဲ။ အန်တီအိုးက တစ်သက်စားမကုန် ဆိုတာမျိုးကွ။ မင်းအဖေကလည်း မဖြိုနိုင်ဘူးထင်တယ်။ မင်းတော့ ကံကောင်းတာပဲ။ ငါ့အမေနဲ့ ငါ့အစ်မက အိုးကားပေမယ့် ပါးတယ်ကွ။ မင်းတို့အိမ်လာတိုင်း မင်းအမေအိုးကြီးကိုငမ်း လီးတောင် ဘောအောင့်ပြီးပြန်။ အိမ်မှာ အမေနဲ့ အစ်မကို အသေလိုးပစ်တာ။ မင်းအမေကို မြန်မြန်ကြံကွာ ငါလိုးချင်နေပြီ။”
”ငါလိုးထဲမှပဲ မင်းကလည်း ငါ့အဖေက စလုံးမှာလေကွာ ဘယ်ဖြိုနိုင်မလဲ။ နောက်ပြီး ငါက မင်းလောက် မရဲဘူးဟ။ ခုမှ ငါ့မှာ အမေပင်တီခိုးရှူလိုက်၊ ရေချိုးရင်ချောင်းပြီး ဂွင်းရိုက်လိုက်ကနေ မတက်နိုင်သေးဘူးဟ”
”အာ့ဆို ဆေးတိုက်ပြီး ကြံကွာ”
”နိုးပါ ငါက နှစ်ဦးသဘောတူတာမျိုးကို လိုချင်တာ။ မင်းငါ့အကြောင်း သိသားနဲ့”
”အေးကွာ မြန်မြန်တော့ကြံ သားရီး”
သီဟနဲ့ ဆည်ဘောင်မှာ သောက်ပြီး ပြန်လာတော့ မူးမူးနဲ့ အိမ်သာကို ဝင်သည်။ အိမ်သာအဝမှာ အမေ့ပင်တီလေး လှမ်းထားတာတွေတော့ ယူပြီး ရှူကာ ကွင်းထုပြီး လရည်ပန်းထည့်ကာ တန်းပေါ်တင်ထားလိုက်သည်။ အမေ ဒီနေ့ ဝတ်ပြီး ချွတ်ထားတဲ့ ပင်တီဆိုတော့ အဖုတ်နံ့က မွှေးနေသည်။
အမေ ရေချိုးတာ ချောင်းချောင်းကြည့်ပြီး အမေ့စောက်ဖုတ်ကို လိုးချင်လာသည်။ အတင်း မလုပ်ချင် လို့ အမေ့ဖင်ကြီးကိုမှန်းပြီး ကွင်းပဲထုနေရသည်။ နောက်နေ့ကျတော့ ကျနော် ကွင်းယူထုပြီး လရည်ပန်းထားတဲ့ ပင်တီ တန်းပေါ်မှာ မရှိတော့။ လျှော်ပြီး လှမ်းထားပြီးပြီ။ အမေ့ကို မသိမသာ ကြည့်လိုက်တော့ မသိသလိုပဲ အိမ်အလုပ်လုပ်နေသည်။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာက ရုပ်တည်တည်နဲ့ ဆိုတော့ ကျနော့်ကို ပြောတော့ ဆူတော့မှာကို သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ကျနော် မနက်စာ စားပြီး အပြင်ထွက်ဖို့ကြံတော့ လှမ်းတားသည်။
“သား ဒါကဘယ်တုန်း။ စားပြီးတာနဲ့ ထွက်ပြီ။ မိုးတွေ အုံ့နေတယ် မသွားရဘူး”
“သီဟနဲ့ ချိန်းထားလို့ပါ အမေ။ သားကို အမေ ဘာခိုင်းမလို့လဲ”
“လာဦး သား ”
အမေက သူ့အခန်းထဲ ဝင်သွားတော့ ကျနော်ပါ လိုက်သွားလိုက်သည်။
“သား မနေ့ညက မူးလာပြီး ဘာလုပ်လဲ”
“ဘာမှမလုပ်ပါဘူး အမေရ။ ရှူးပေါက်ပြီး အိပ်တာလေ”
“သား… သား… စင်မှာလှန်းထားတဲ့ အမေ့ပင်တီကိုယူပြီး ကွင်းထုမိပါတယ် အမေ”
“ဘာလို့ အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲ သား။ ဘာလဲ သားက မိန်းမလိုချင်နေပြီလား။ ချစ်သူရှိနေပြီလား”
“မဟုတ်ဘူး အမေ။ သား မိန်းမ စိတ်မဝင်စားဘူး။ အမေ့ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတာပါ။ အာ့ကြောင့် အမေ့ပင်တီကို ယူပြီး ကွင်းထုမိတာပါ”
“ငါ့က မင့်အမေလေ။ ကိုယ့်အမေကို ပြန်ပြီး ကြိုက်လို့ရမလား”
“မသိဘူး အမေ။ သား အမေ့ကိုပဲ ချစ်တယ်”
ကျနော် အမေ့ကို ဆွဲဖက်ပြီး နမ်းတော့ အမေက တွန်းထုတ်ပြီး ပါးရိုက်သည်။
“ရိုက်ပါ အမေ ရိုက်ပါ။ အမေ့ကို ချစ်ရမယ်ဆို အမေသတ်လည်း လည်စင်းပေးထားမှာပါ”
“အဟင့် ဟင့် ဟီးး။ ငါကတော့ ငါ့သားလေး တစ်ယောက်တည်းဆိုပြီး အလိုလိုက်ထား ချစ်လိုက်ရတာ။ ဆိုးသမျှ ခွင့်လွှတ်လိုက်ရတာ။ နင်ကတော့ အမေကို ပြန်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်… ဟီးးးး ဟီးးးးဟီးးးး”
“အမေရယ် သားလိမ္မာပါ့မယ် အမေ့စကားလည်း နားထောင်ပါ့မယ်နော် ”
အမေက ငိုနေဆဲ။ ကျနော် အမေ့ကို ဖက်ထားလိုက်တော့ အမေက ပြန်ဖက်သည်။ ခဏကြာတော့ အငိုတိတ်သွားသည်။
“အမေ့ပြောစကား နားထောင်ရမယ် အရက်မသောက်ရဘူး ရန်မဖြစ်ရဘူး စာမေးပွဲလည်း ပြန်ဖြေရမယ်။ အာ့ဆို သားဖြစ်ချင်တာကို အမေလိုက်လျောမယ်”
“အမေ တကယ်ပြောတာလား။ သား အားလုံး ကတိပေးတယ်။ လိမ်လိမ်မာမာနေမယ်”
“ယောကျ်ားကတိနော် သား။ ပေးပြီးသား ကတိကို မချိုးဖောက်ရဘူး”
“သားယောကျ်ားပါ အမေ။ ကတိတည်တယ်”
“ဟေးးး ပျော်လိုက်တာ အမေ့ကို ချစ်တယ်”
အမေ့ပါးကို နမ်းပစ်လိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ် လှဲအိပ်လိုက်ပြီး အမေ့နှုတ်ခမ်းကို နမ်းသည်။ အမေလည်း အဖေနဲ့ မနေရတာကြာလို့ စိတ်ထလာပြီး ကျနော့်ကို ပြန်နမ်းလာသည်။
“သား လူပျိုပဲ ရှိပါသေးတယ် အမေ။ သားတို့က အရက်သောက်တယ် ရန်ဖြစ်တယ် ဆေးမချဘူး ဖာမလိုက်ဘူး ဆော်လည်းမထားဘူး”
“အင်းပါ အမေ ယုံပေးလိုက်မယ်”
အမေ့ကို နမ်းရင်း နိုတွေကို ညှစ်ပေးသည်။ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်ရှည်ကြီးဆိုတော့ နှိုက်မရ။ အနမ်းကို ရပ်လိုက်ပြီး အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်သည်။ ကျနော့်အခန်းကို အမြန်ပြေးပြီး ဖုန်းကို ယူလိုက်သည်။
“သား ဖုန်းက ဘာလုပ်ဖို့လဲ”
“အမေ့နဲ့ သားရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို မှတ်တမ်းတင်ထားမလို့ပါ”
“အမေကလည်း ဒါရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ ချစ်စရာလေ ချစ်စရာ။ ဖုန်းနဲ့ ရိုက်နေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားလိုက်ပါ အမေ။ သားရဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ်မှာ အမှတ်တရဖြစ် ချင်လို့ပါ။ နော် အမေ နော် နော်”
ဖုန်းကို အမေ့ မှန်တင်ခုံပေါ်ကနေ ချိန်ပြီး ရိုက်ထားလိုက်သည်။ အမေက တုံးလုံးဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လည်း အဝတ် အမြန် ချွတ်လိုက်သည်။ အမေ့ပေါင်ကို ဆွဲကားပြီး အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးဆီ မျက်နှာအပ်လိုက်သည်။ အမေလည်း စိတ်တော်တော် လာနေတယ်ထင်တယ်။ အရည်တွေ စိမ့်ထွက်နေသည်။ အဖေနဲ့ မလိုးဖြစ်တာလည်း ကြာပြီ ၃ လလောက် ရှိနေပြီ။ အမေက အသားဖြူတော့ အရည်ရွှမ်းတာပေါ့။
ရှလွတ်ဆို အဖုတ်ကြီးကို ယက်လိုက်တော့ အမေ တွန့်သွားသည်။ မိန်းမ မလုပ်ဖူးပေမယ့် သီဟ ပြောပြတာတွေ ကားတွေ ကြည့်ဖူးတာတွေကြောင့် မစိမ်းပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အဖေနဲ့သာ လိုးဖူးတဲ့ အမေ့အဖုတ်က သိပ်တော့ရွဲပလဲမနေပါ။ ကြွက်နားရွက်လေးတွေက သိပ်တောင်မမဲသေးပါ။ အဖုတ်ကြီးကို ပင့်ယက်တင်ပေးလိုက်သည်။ လက်နဲ့ဖြဲတော့ အတွင်းသားလေးတွေက ရဲလို့။ လျှာကိုစုချွန်ပြီး အထဲကို သွင်းလိုက်သည်။
“အ ရှီးးး ကောင်းလိုက်တာ သားရယ်။ သားအဖေ ယက်ပေးတာတောင် သားလောက် မကောင်းဘူး။ လုပ်တော့ကွယ် အမေ မနေနိုင်တော့ဘူး။ လိုးတော့”
ကျနော်လည်း ဆက်မယက်တော့ဘဲ အမေ့ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ကာ အဖုတ်ဝ လီးတေ့ပြီး ထိုးချလိုက်တော့သည်။
“ဗြစ် ဘလစ် ဗြစ်ဗြစ် ဘွတ် ဗြွတ်”
“သားရယ် တဆုံးပဲကွယ် အောင့်သွားတာပဲ။ ဖြည်းဖြည်း သွင်းရတယ်ကွယ့်”
“သား လောသွားလို့ပါ အမေ။ ဆောရီး ဟီးး”
“ကဲလုပ်တော့ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန်လုပ်”
အမေ့ပေါ် မှောက်လိုက်ပြီး ဖင်းကြွကာ ပုံမှန်ပဲ လိုးပေးသည်။ အမေကို နမ်းပြီး လိုးနေရင်း အမေရဲ့ အဖုတ်အရသာကို ခံစားမိသည်။ အဖုတ်က မကျယ်ဘဲ ခပ်စည်းစည်းသာ ရှိသေးသည်။
“အရှိန်တင်လုပ်တော့ သား လုပ်လုပ်”
ကျနော်လည်း ထိန်းထားသမျှလွှတ်ပြီး အမေ့အဖုတ်ကို ဆောင့်ဆောင့် လိုးမိသည်။ ဒစ်ထိပ်က အထဲမှာ တစ်ဒုတ်ဒုတ်နဲ့ သွားဆောင့်သည်။ ကျဉ်ခနဲနေပြီး တော်တော်လေး ကောင်းသည်။
“အမေ… သား ထွက်တော့မယ် ထွက်တော့မယ် အား အီး”
“ခပ်ပြင်းပြင်းလုပ် သား…. အမေလည်း ပြီးတော့မယ် ဆောင့်ဆောင့်”
“ဗြွတ်ဘလပ် ဘုဘွက် ဇွတ်ဇွိ”
အရည်တွေ အိုင်လာပြီး အသံမျိုးစုံလည်း ထွက်နေသည်။ အခန်းထဲမှာတော့ လိုးဆောင့်သံတွေ ဆူညံလို့။ အပြင်မှာတော့ မိုးက တအုန်းအုန်း ရွာချ နေသည်။ ကျနော်လည်း မထိန်းနိုင်တော့။ အမေ့အဖုတ်ထဲ လရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။
“အား… ထွက်ပြီ အမေရေ… ထွက်ပြီး အား အား”
“အမေလည်း ပြီးပြီကွယ်… ငါ့သားက အလိုးတော်သားပဲ”
“နောက်လည်း လိုးမယ်နော် အမေ”
“သား သဘောပါဆို လိမ်မာရမယ်နော်”
ထိုနေ့က တစ်နေကုန် မိုးကလည်းရွာ ကျနော်တို့ သားအမိကလည်း အခန်းထဲက မထွက်ဘဲ လိုးကြသည်။ လိုးလိုက် အိပ်လိုက်နဲ့ နေ့လည်စာတောင် မစား။ ပုံစံမျိုးစုံလည်း လိုးဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်လည်း ကိုယ့်စကားအတိုင်း လိမ်လိမ်မာမာ နေသည်။ ကျူရှင်ပြန်တက်ပြီး စာပြန်လုပ်သည်။ သီဟလည်း အတူတူပင်။ အရက်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေ အမေ့ဆီက ခွင့်တောင်းပြီး နည်းနည်းပဲ သောက်သည်။ ရန်လည်းမဖြစ်တော့။ အဖေနဲ့ အစ်မကလည်း ကျနော် မဆိုးတော့ဘဲ လိမ်မာနေလို့ ဝမ်းသာနေသည်။
အမေနဲ့ ညတိုင်း အိပ်ချိန်ဆို တစ်ချီ အမြဲ လိုးဖြစ်ကြသည်။ ဖင်းကိုလည်း လိုးဖို့စမ်းသည်။ မူးပြီးလိုးတော့ အမေ ဖင်းကွဲသွားသည်။ ခုတော့ အေးဆေးပါ။ အမေလည်း ဖင်းခံတတ်နေပြီ။
သီဟကို ဗီဒီယို ပြလိုက်တော့ ဝမ်းသာနေသည်။
“ဟျောင့် မင်းအမေက ထန်တယ်ဟ ဖင်းကုန်းနေတာကွာ လိုးချင်စရာကြီး အဖုတ်ကြီးကလည်း ပြူးလို့ ”
“အေး… ငါ ဖင်ပါ ချလိုက်ပြီ ဟိုတစ်လောက”
“ဟ ငါ့ကောင် တိုးတက်မှုက တယ်မြန်သကိုးကွ…. ဘယ်တော့ ငါလိုးလို့ရမလဲ… ငါကိုင်ချင်နေပြီကွာ… အန်တီဖင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး သရည်ကျနေတာဟ”
“ငါလိုးရယ် စိတ်ရှည်ဟ… ငါတောင် ဒီအခြေအနေဖြစ်အောင် မနည်းဖန်တီးထားရတာ”
“ငါ့အမေနဲ့ အစ်မကို မင်းအရင်ချကွာ… သူတို့ကတော့ အေးဆေးပဲ… ငါက ညှပ်လိုးချင်နေတာ အတော်ပဲ…. မင်း မနက်ဖြန်ည လာအိပ်ကွာ ​လေးယောက်ဆွဲမယ်”
“ညအိပ်လို့ မရဘူးဟ… အိမ်မှာက အမေ တစ်ယောက်တည်းလေကွာ”
“အေး ဟုတ်သားပဲ… အာ့ဆို စနေ့နေလည်လာကွာ… အဲ့နေ့ စျေးပိတ်တော့ အမေတို့ရှိတယ်…. ငါတို့လည်း ကျူရှင်လည်း အားတယ်”
“အေး စနေနေ့ နေ့လည်လာမယ်… ငါက အမေ့ကိုပဲ လိုးဖူးတာကွာ… အခု အခြားသူကို လိုးရမယ်ဆိုတော့ ရင်ခုန်သား”
“မေလိုးရယ် လိုးရင်း ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်… ပြီးရင် အန်တီကိုသာ စည်းရုံး…. ရပြီဆို တို့အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မယ်”
“အေးပါ မေလိုးရယ် အတူတူချင်းကို”
အမေက ကျနော်နဲ့ လိုးပြီးကတည်းက အဝတ်အစားလေးတွေလည်း ခေတ်ဆန်ဆန် ခပ်ဟော့ဟော့လေးတွေ ဝတ်လာသလို ပိုလည်း ထန်လာသည်။ ကျနော်နဲ့လည်း အရင်းနီးဆုံး သူငယ်ချင်းလို ဖြစ်လာသည်။ တိုင်ပင်စရာရှိရင် တိုင်ပင်သည်။ အိပ်ရင်လည်း တူတူအိပ်ဖြစ်သည်။ ညဘက် အမေ့ကို လိုးရင်း ကျနော်နဲ့ အဖေ မဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်ယောက်ကို ခံဖို့ ပြောကြည့်တော့ သိပ်လက်မခံချင်သေး။
“သားရယ် အမေက သားနဲ့ လိုးနေတာတောင် လွန်လှပြီ…. သားအဖေကို အားနာတယ် အခြားသူနဲ့ဆိုတော့”
“အမေကလည်း အခြားသူ မဟုတ်ပါဘူး သီဟနဲ့ပါ… အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်အောင်”
“ဟင် ကောင်စုတ်လေး… အမေကို လိုးချင်တိုင်း လိုးပြီး အားမရလို့ သူများကို လိုးခိုင်းမလို့လား”
“မဟုတ်ပါဘူး အမေရ… အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင်ပါ။ သီဟကလည်း ကျနော်တို့လိုပဲ သူ့အမေနဲ့ အစ်မကို လိုးနေတာ။ နောက်ပြီး အမေကို ဟိုလဒက သရည်ကျနေတာ။ အမေ့ ဖင်းကြီးကို မြင်တိုင်း ခေါ်တောအားနဲ့ ကြည့်နေတာလေ”
“ထင်တော့ထင်သား ဟိုတစ်လောက သားမရှိတုန်း အိမ်လာတုန်းက ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတာကိုး နှာဘူးလေးတွေ။ နေပါဦး သားတို့က အမေတို့ကို လိုးဖို့ တိုင်ပင်နေကြတယ်ပေါ့ အခြားသူတွေကော သိလား”
“ဒါမျိုးက လူသိလို့မှ မရတာ အမေရ။ သူ့အမေနဲ့ အစ်မကို လိုးနေတာ ကြာပြီဗျ။ သားကိုလည်း သူပဲ တိုက်တွန်းတာ ဟီး”
“ဟင် သူငယ်ချင်းကောင်းပေါ့။ သားက ဘယ်လိုသိလဲ”
“သူပြောပြတာ ဗီဒီယိုလည်းပြတယ် ကြည့်မလား အမေ သားဖုန်းထဲမှာ သိမ်းထားတယ်”
သီဟတို့ သားအမိ လိုးနေတဲ့ ဗီဒီယိုကို ပြလိုက်တော့ အမေ့မျက်လုံးက လင်းလက်နေသည်။ ကြည့်ရင်း ကျနော့် လီးကိုကိုင်ကာ ထုပေးသည်။ ကျနော်လည်း အမေ့အဖုတ်ကို နှိုက်ပေးသည်။ အမေ့ကို ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး အဖုတ်ကို လီးတေ့ပြီး လိုးသည်။ ပါးစပ်ကလည်း သီဟ အမေ့ကို လိုးနေသလို ပြောသည်။ ဖုန်းယူပြီးလည်း ဗီဒီယို ရိုက်လိုက်သည်။
“အန်တီ ဖင်းကြီးက ကောင်းတာဗျာ။ အမေ့နဲ့ အစ်မဖင်ထက် ကိတ်တယ်။ လိုးလို့ကောင်းတာဗျာ။ အန်တီကို လင်းထက် လိုးတာနဲ့ ကျနော်လိုးတာ ဘယ်သူလိုးတာ ပိုကောင်းလဲ”
“သားက ပိုကောင်းတယ် သီဟရယ် လိုးပါကွယ်။ အန်တီကို မညှာနဲ့ ဆောင့်လိုး”
အမေလည်း သီဟတို့ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ထန်လာကာ ကျနော်ပြောသလို အလိုက်သင့် ပြောသည်။ ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေလောက်မှာ သီဟရေ မင်းတော့ လီးသွေးထားတော့ဟ။
“အန်တီ ဖင်းချမယ်နော် အန်တီဖင်ပေါက်က လိုးချင်စရာ”
ကျနော်လည်း အဖုတ်ထဲမှ လီးဆွဲထုတ်ပြီး အမေ့ဖင်ဝတေ့ကာ တစ်ခါတည်း လိုးသွင်းလိုက်သည်။ လီးမှာ အဖုတ်ရည်တွေ ပေနေတော့ ဖင်းထဲကို လီး လျှောခနဲ ဝင်သွားသည်။ ဖင်းကို ကြမ်းကြမ်းပဲ လိုးသည်။ မူးပြီး လိုးတုန်းကတောင် ဒီလောက်မကြမ်း။
“ဘု ဘလွတ် ဗြီးးးး ဘွတ် ဘွတ် ဘု ဘု ဗြစ်”
“အားးး သီဟရယ် အန်တီဖင်းကိုလိုးပါ ဖင်းကွဲလည်း ကွဲပါစေတော့ အိုးးး အူးးး”
“ကော့ပေး အန်တီ ကော့ကော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ခေါင်းဗျာ ကြပ်နေတာပဲ”
ခဏကြာတော့ အမေ သူ့အဖုတ်ကို ပွတ်ပြီး တစ်ချီပြီးသွားသည်။ ကျနော်လည်း ဟိုက်ထိုးတဲ့အထိ အမေ့ကို ဖင်းလိုးပစ်လိုက်ပြီး ပြီးခါနီးကျတော့ ဖင်းထဲမှလီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဖင်းဝကရဲပြီး ပွစိစိနဲ့ ကျန်ခဲ့သည်။ လီးထိပ်မှာတော့ ချီးပေလာသည်။ အမေ့ကို ပက်လက်လှန်ကာ လီးကို ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး လိုးသည်။ ချီးပေလာတာ မြင်ပေမယ့် မသုတ်ဘဲ တန်းစုပ်သည်။ လက်တစ်ဖက်က ဖုန်းကိုကိုင် တစ်ဖက်က အမေ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ဖင်းကို ကြွကာလိုးပစ်သည်။ လည်ချောင်းထဲပါ ဝင်ကုန်ပြီး လရည်တွေလည်း ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။
“အားးးးး ဟားးးးးး ဟူးးးးး ရှီးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ အမေရယ်”
“ဝူး ဝူး ဝူးးးး”
ကျနော်ဖင်းကို လာရိုက်တော့မှ အမေ့ပေါ်မှ ထလိုက်သည်။
“ဆောရီး အမေရယ် သားလည်း ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး ကောင်းတာတော့ ကောင်းတာဗျာ”
“ကောင်ဆိုးလေး… သားကသာကောင်း… အမေတော့ ဖင်းလည်းပူ ကျိန်းစပ်ပြီး အသက်ရှူလည်း ကြပ်တယ်… သူ့လီးကို လည်ချောင်းထဲပါ သွင်းတယ် ဟွန်းးး”
“ဟီးး ကောင်းသွားလို့ပါ အမေ ဟဲဟဲ… အမေ သီဟနဲ့ လိုးမှာလားဟင် ဘယ်လိုလဲ”
“အင်း အမေ စဉ်းစားမယ်… သားကရော သူ့အမေနဲ့ အစ်မကို လိုးပြီးပြီလား”
“မလိုးရသေးပါဘူး အမေရ… သားအစကနေ အခုထိ အမေ့ကိုပဲ လိုးလာတာ… သီဟကလည်း သူ့အမေနဲ့ အစ်မကိုပဲ လိုးဖူးတာ… လာမယ့် စနေ့နေ့တော့ သူ့ အိမ်မှာ လိုးဖို့ ချိန်းထားတယ်… အမေပါ လိုက်ခဲ့ပါလား ဟင်”
“အမေ စဉ်းစားဦးမယ်ကွယ်… သားလိုးချင်ရင်တော့ သွားလိုးချေ အမေခွင့်ပြုတယ်… ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ အမေကြည့်မယ်”
“ဟုတ်အမေ အာ့ကြောင့် အမေ့ကို ချစ်တာ”
“ဟွန့် ချစ်လို့ပဲ ခုနကကျတော့ လူကို လိုးလိုက်တာ ဖာသည်ကို လိုးနေသလားပဲ မှတ်ရတယ်… အပေါက်တွေလည်းစုံလို့… ဒါပဲနော် အမေပြောစကားတော့ နားထောင်ရမယ်”
ဆည်ဘောင်ရောက်တော့ သီဟကို ဗီဒီယို ပြလိုက်တယ်။ မျက်လုံးတွေ ပြူးလို့။
“ဟာ ငါ့ကောင် မင်းကလည်းလုပ်လိုက်ရင် အဆန်းတွေချည်းပဲ ပါးစပ်ပါလိုးတာ…. အာ့မျိုး ငါတောင် မလုပ်ဖူးဘူး… မင်း ငါ့ထက် သာသွားပြီ”
“မနက်ဖြန်ကျမှ စမ်းသပ်ကွာ…. ငါလည်း ထန်ပြီး လုပ်မိသွားတာ… အမေကတော့ မင်းနဲ့လိုးဖို့ကို စဉ်းစားမယ်တဲ့… ငါ့ကိုလည်း မင်းအမေနဲ့ လိုးဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်”
“ဟွားးးး မိုက်တယ်ကွာ အန်တီဇီဇဝါ ဖင်းကြီးကို လိုးရတော့မယ် ယေ့ယေ့ ”
“မင်း စောင့်တော့ စောင့်ရမယ်နော်… သူစဉ်းစားဦးမှာ”
“အေးပါကွာ မုန့်က လက်တစ်ကမ်းအလို ရောက်နေပြီပဲ အေးဆေးပေါ့…. လာကွာ ဆိုင်သွားပြီး ကစ်မယ် အားမွေးမယ်”
ဆိုင်ထိုင်ပြီး လေးပတ်စီကိုင်ကာ ပြန်လာလိုက်သည်။ အမေကတော့ မနေ့ညက အပြင်းကျူံးထားလို့ အဖုတ်နာ ဖင်စပ်ပြီး အိပ်ယာထဲ ခွေနေသည်။ ကျနော်လည်း ထမင်းစားပြီး စာကျက်လိုက်သည်။ အိပ်ယာဝင်တော့ အမေ့နောက်က ဝင်အိပ်ပြီး ညဝတ် ဂါဝန်ကို လှန်လိုက်သည်။ အမေက ကွေးကွေးလေး အိပ်နေတုန်း။ အမေနဲ့ ဇောက်ထိုးနေလိုက်ပြီး အမေ့ပေါင်ကိုမကာ ပေါင်ကြားခေါင်း ထိုးလိုက်သည်။
“သားရယ် အမေ နာနေတုန်းကွယ်”
“အင်းပါ မလိုးပါဘူး အမေရဲ့… အမေ အနာ သက်သာအောင် လုပ်ပေးမလို့ပါ”
ဖင်းဝမှ အဖုတ်ကို လျှာနဲ့ ယက်သည်။ အစိကို အဖုတ်ထဲ လျှာထည့်ယက်သည်။ ဖင်းကိုးချည်း သီးသန့်ယက်လိုက် အဖုတ်ကိုချည်း ယက်လိုက်နဲ့ အမေ နာကျင်ထားတာတွေကို ဖြေဖျောက်ပေးလိုက်သည်။ ကျနော့် မျက်နှာကို စောက်ရည်တွေနဲ့ ပန်းတော့ ပါးစပ်ဟပေးပြီး မျိုချလိုက်သည်။ အမေ့ ပေါင်ကြားမှ ထွက်လိုက်ပြီး တောင်နေတဲ့လီးကို အဖုတ်ကြားညှပ်ပြီး မလိုးဘဲ ပွတ်ပေးသည်။
“သား လိုးချင်လည်း လိုးကွယ်… ဖင်တော့ မလိုးနဲ့ဦး အဖုတ်ထဲမှာပဲပြီးလိုက်…. ပြီးရင် မချွတ်ဘဲ အိပ်စို့”
အမေပြောသလို ပုစွန်ထုပ်ကွေး တစ်နည်းထဲ ပုံမှန် ညင်ညင်သာသာလေး လိုးပေးပြီး လရည်တွေ အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်ကာ အိပ်လိုက်တော့သည်။ မနက်နိုးတော့ လီးက ထုံးစံအတိုင်း တောင်နေသည်။ အမေ ရှင်းပေးထားလားမသိ။ လီးက သန့်ရှင်းနေသည်။
လီးတန်းလန်းနဲ့ပဲ အပြင်ထွက်လာလိုက်သည်။ အမေက မီးဖိုချောင်မှာ ဟင်းချက်နေသည်။ နောက်ကနေ ဖက်ပြီး လီးကို ဖင်းကြားထဲ ဂါဝန်ပေါ်မှ သွင်းလိုက်သည်။ နိုကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ကိုင်ညှစ်ပေးလိုက်သည်။
“လန့်တာ သားရယ် အသံမပေး ဘာမပေးနဲ့… သွား ရေချိုး သီဟတို့အိမ် သွားမယ်ဆို”
အမေ ခေါင်းလှည့်ပြောတော့ နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲနမ်းလိုက်သည်။ ခပ်ကြာကြာလေး နမ်းပြီး ခွာလိုက်သည်။
“အမေလည်း ချစ်ပါတယ် သားရယ်… မေ့သားလေးကို ချစ်တာတုန်လို့… အာ့ကြောင့် ခုလို အလိုလိုက်ထားတာပေါ့”
“ညက ကောင်းလားဟင် အမေ”
“အင်းကောင်းတယ်… အမေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကြိုက်သလို အဲ့လို ပျော့ပျော့လေးလဲ ကြိုက်တယ်”
“အင်း လိုး ခုရေချိုးတော့ ၉ နာရီရှိပြီ… ထမင်းစားပြီးမှသွား အားရှိမယ့်ဟာတွေပဲ အမေချက်ထားတယ်… ဟိုရောက်ရင် တန်းမလိုးနဲ့ဦးနော် အေးဆေးမှစ”
“ဟုတ်အမေ သားတို့ စာအရင်လုပ်ဦးမှာပါ အေးဆေးမှ စကြမှာ”
“ကောင်းတယ် သား… ကဲ ရေချိုးတော့”
ကျနော် သူများနဲ့ သွားလိုးမယ့်ဟာကို အားရှိမယ့် အစာတွေချည်းပဲ ချက်ထားတယ်တဲ့။ ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမေလည်းဗျာ။ သီဟကိုတောင် အမေနဲ့ ပေးမလိုးချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းအရင်းကြီး ဖြစ်တဲ့အပြင် အမေ့ကိုလည်း အတွေ့အကြုံအသစ် ရစေချင်တော့ လိုးခိုင်းရမည်။ ကျနော့်လည်း အတွေ့အကြုံ အသစ်ရမည်။ အဖေနဲ့မမ ပြန်လာရင်လည်း စည်းရုံးပြီး အင်းစက်မိသားစုလည်း တည်ထောင်မည်။
မမက အပျိုကြီး ဖြစ်တော့မည်။ လင်လည်း မယူသေးသလို ရည်းစားလည်း မရှိသေး။ အရင်က တစ်ယောက် ထားဖူးသည်။ သူ့ကို ဟိုကိုင်သည်ကိုင် လုပ်လို့ဆိုပြီး ပါးရိုက်ပြီး ဖျက်ခဲ့သည်။
အမေနဲ့ကျနော်က ချစ်ကြသလို အဖေကလည်း သူ့သမီးမှ သူ့သမီး။ ကျနော့်ကိုလည်း အဖေက အမြဲအပြစ်ဆိုသည်။ အမေ့ကိုတောင် မိဘပေးစားလို့ ယူထားပေမယ့် ကလေး ၂ ယောက် ရတဲ့အထိ ချစ်စကား မပြောဖူးဘူးတဲ့။ မမနဲ့ အဖေရဲ့ စိတ်တွေကို ပြောင်းလဲပေးရမည်။ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ အင်းစက်မိသားစု ဘဝလေးကို ကျနော်လိုချင်မိသည်။
“လာ မေလိုး မင်းကလည်း ခုမှလာတယ် စောစောမလာဘူး”
“ဟိုဘက်လမ်းက အသုဘသွားတယ် ပြန်လာတော့မှာ ခုဘယ်လိုလဲ အခြေအနေ”
“စာလုပ်ရအောင်ကွာ ဟိုကိစ္စက အေးဆေးပေါ့ အချိန်ရတာပဲ”
“ဟ စာတွေ လာကြိုးစားနေတယ်”
“အမေ့ကို ကတိပေးထားတယ်ကွ စာကြိုးစားပါ့မယ်လို့… သူလည်း ငါ့အကြိုက် လိုက်လုပ်ပေးပြီးပြီလေကွာ… ငါတို့လည်း အချိန်တွေ ဖြုန်းခဲ့ကြပြီးပြီ…. မင်းလည်း ကြိုးစားတော့ကွာ အန်တီသင်းနဲ့ မမဇူးကို ချစ်တယ်ဆို ”
“အေးကွာ ငါလည်း စဉ်းစားနေတာကွ… ရှိတ်ကွာ သားရီး စာအရင်လုပ်တာပေါ့…. ဟိုဟာက တစ်သက်လုံး လုပ်လို့ရတာပဲ”
ကျနော်တို့ စာလုပ်လို့ တော်တော်ခရီးရောက်တော့ အန်တီသင်းတို့ သားအမိ ပြန်ရောက်လာသည်။
“ကိုထက် ရောက်နေတာကိုး ဝီရိယတွေ ကောင်းပါ့…. အံမယ် အမေရေ ဘုရားပွင့်မယ်တော့်…. စာတွေ လုပ်နေကြတာ”
“ငါတို့ အချိန်တွေ မဖြုန်းချင်တော့ဘူးဟာ… ငါမွှေလို့ မမ နင်နဲ့အမေ ရှင်းရကုန်ရတာ မနည်းဘူးလေ ငါ ကြိုးစားတော့မယ်… ဒီနှစ် အောင်ကို အောင်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ မမ”
“တကယ်ဆို ဝမ်းသာတာပေါ့ သားရယ်… ကဲ စာလုပ်ကြ… သမီးရေ လက်ဖက်သုပ်ပေးလိုက်ကွယ် မောင်လေးတွေကို”
“အာ့ဆို ဒီနေ့ အစီအစဉ်က”
“လာမှာပေါ့ မမရ… စာလည်းလုပ်ရင်း နင်နဲ့ အမေ့ကိုလည်း ဘုရင်း ဟဲဟဲ”
မမဇူးက သွက်သွက်လက်လက်လေး ဖင်းလေးခါခါ ခါခါနဲ့ နောက်ဖေးဝင်သွားသည်။ အန်တီသင်းက သီဟကို နှုတ်ခမ်းကိုနမ်း ကျနော့်ကိုလည်းနမ်း လီးတွေကို ကိုင်ညှစ်သွားကာ အိပ်ခန်းထဲ အဝတ်ဝင်လဲသည်။
“ခုတော့ အနမ်းပေါ့ ပြီးမှ ခစ်”
ကျနော်နဲ့ သီဟလည်း အန်တီသင်း နမ်းသွားတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုယ်စီကိုင်ပြီး ကျန်ခဲ့သည်။ လီးလည်း တောင်လာသည်။ စာဆက်လုပ်ကြပြီး နေ့လည့်ကျတော့ ထမင်းစားရင်း နားလိုက်သည်။ စားပြီးတော့ စာလက်ကျန်လေး ဆက်လုပ်ရင်း အစာခြေနေလိုက်ကြသည်။
တစ်နာရီလောက် ကြာတော့ စာတွေလည်း ပြီးသလို အစာလည်း ကြေပြီ။ အလုပ်စကြတာပေါ့။ ဧည့်ခန်းထဲကနေ အန်တီသင်းနဲ့ မမဇူး အိပ်နေကြတဲ့ အခန်းကို ထလာကြသည်။
“ဟျောင့် လင်းထက် အမေနဲ့မမ မင်းဘယ်သူ့ကို အရင်ချမလဲ”
“မမဇူးကို အရင်လုပ်မယ်… မင်းက မင်းအမေကို အရင်လုပ် ပြီးမှ ငါလုပ်မယ်”
“အေး ရတယ် လုပ်”
“ငါ ဗီဒီယိုရိုက်မယ်နော် အမေ့ကို ပြမလို့”
“မင်းကြိုက်တာလုပ် အန်တီ ဖီးလာပြီး ငါ့ကို မြန်မြန်ကုန်းဖို့ အရေးကြီးတယ်”
“အမေနဲ့ မမက အိပ်တောင် အိပ်နေကြပြီဟ”
“ရတယ် မင်း ဖုန်းကို သေချာသာ ချိန်ထားလိုက် ပြီးရင် ငါတို့ ပြိုင်တူဝင်မယ်”
ကျနော်လည်း ဖုန်းကို သီဟပြတဲ့ နေရာမှာ သေချာအထိုင်ချပြီး ချိန်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အဝတ်တွေ ကိုယ်စီ ချွတ်လိုက်ကြသည်။ အန်တီသင်းနဲ့ မမခြုံထားတဲ့ စောင်ပါးလေးတွေကို ဆွဲဖယ်လိုက်တော့ အဲ့လဲ့ သူတို့က အဝတ်တွေ ကြိုချွတ်ထားပြီး အိပ်နေကြတာဗျ။ သားအမိနှစ်ယောက် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပြီး အိပ်နေကြတာဗျ။
ကုတင်ပေါ် တက်လိုက်ပြီး ပိန်ပိန်ပါးပါး ကိုယ်လုံးလေးတွေကို ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ ကျနော်က မမဇူး အဖုတ်ကို နှိုက်ကာ နိုတွေကို စို့လိုက်သလို သီဟကလည်း အန်တီသင်း အဖုတ်ကို နှိုက်ပြီး နိုကိုစို့နေသည်။ အိပ်နေတဲ့ မမဇူးနဲ့ အန်တီသင်း နိုးလာကြသည်။
“ကောင်စုတ်လေးတွေ အခုမှပဲလာတယ်… ငါတို့မှာစောင့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်”
“ဟုတ်ပါ့ အမေရယ်… အခုမှ စာတွေ ကြိုးစားပြနေကြတာ ခါတိုင်းဆို သမီးနဲ့ အမေ့ကို တဖုန်းဖုန်း လိုးနေတဲ့ အကောင်က”
“ငါတို့ မလာသေးလို့ဆိုပြီး နင်နဲ့အမေ ခြောက်ကိုး ဆွဲကြသေးတယ် မှတ်လား”
“ဆွဲတာပေါ့ နင်တို့ကကြာတော့ မနေနိုင်လို့ဟဲ့”
“ဒီနေ့တော့ နင်နဲ့အမေ့ကို ငါတို့ ညှပ်လိုးမှာ… တော်တော်ရွနေ…. မမ ပြီးမှ ပြဲပါပြီ ဘာညာ မအော်နဲ့”
“အမယ်လေး နင်လိုးလွန်းလို့ ငါနဲ့အမေလည်း ဖင်ခေါင်းရော စောက်ခေါင်းပါ ကျယ်နေပါပြီဟယ် ပြဲပါလေ့စေ”
“အေးပါ အခုတော့ လင်းထက်လိုးတာခံနှင့်ဦး သူကနင့်ကို အရင်လိုးမယ်တဲ့”
“ပျော်တာ ငါအရင် မြည်းရတော့မယ်… ကိုလင်း လာအိပ်လေ မမ လီးစုပ်ပေးမယ်”
ကျနော်ပက်ဘလက်အိပ်လိုက်တော့ မမဇူးက လီးကို ဆွဲစုပ်တော့သည်။
“ဟျောင့် မင်းအမေကိုလုပ်သလို လုပ်လိုက်စမ်းပါကွာ”
မမဇူး လီးစုပ်တော့ ကျနော်က ခေါင်းကိုကိုင်ကာ လီးကို လည်ချောင်းရောက်အောင် သွင်းသလို သီဟကလည်း အန်တီသင်း မျက်နှာပေါ် တက်ခွပြီး ပါးစပ်ကို လိုးနေသည်။
“ဘွတ် ပွက်ပွက် ဖရှူးးးး ဘွတ် ဝေါ့ အု”
သီဟက သူ့ဖင်ဖြဲပေးထားပြီး အန်တီသင်းက အောက်ကနေ လျှာနဲ့ယက်နေသည်။ ကျနော်လည်း ပေါင်မြှောက်ကာ ဖင်ကိုဖြဲလိုက်ပြီး ဖင်အယက်ခံလိုက်သည်။ မမဇူးက သီဟကို ယက်ပေးနေကြလားတော့မသိ ကျနော့်ဖင်ကို သေချာဖြဲယက်တဲ့အပြင် ဖင်ထဲကိုပါ လက်ညှိုးလေး သွင်းပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ပေးတော့ လီးက အဆမတန် တောင်လာသည်။ ပြီးသွားမှာစိုးတာနဲ့ မမဇူးကို ဖင်းထောင်ခိုင်းပြီး ပိန်ပိန်ပါပါး အိုးကားကားလေးကို ကိုင်ကာ ဆောင့်လိုး တော့သည်။
သီဟက ကျနော့်ထက် လီးနည်းနည်းသေးတော့ မမဇူး အဖုတ်က ကျနော့်အတွက် မကျယ်ပါ။ အဖုတ်ကို လိုးပြီးတော့ ကုန်းယက်ပြီး ဖင်းကိုလိုးသည်။ မမဇူးက ဖင်းခံရတာ ကြိုက်တယ်ဗျ။ ကျနော် မလိုးခင်ကတည်းက ဖင်းကိုချခိုင်းနေတာ။ အန်တီသင်းလည်း တူတူပဲ။ အခု သီဟအပေါ်ခွပြီး ဖင်းဝလီးတေ့ပြီး ဆောင့်ချနေလေရဲ့။ အခန်းထဲမှာတော့ ဖင်နဲ့စည်းခုံရိုက်သံ တဖတ်ဖတ် ဖင်ထဲက လေအန်သံတွေက တဘွပ်ဘွပ်ပေါ့ဗျာ။
“အမေ မမကို အပေါ်ကနေ ခြောက်ကိုး ဆွဲမယ်ဗျာ… သားနဲ့လင်းထက် နောက်ကနေ ဖင်ချမယ်… လင်းထက် မင်း အမေ့ကိုလိုး ငါမမကို လိုးမယ်”
ကျနော်တို့ အမြန်ပဲ နေရာချိန်း ပုံစံချလိုက်ပြီး ကျနော်က အန်တီသင်း ဖင်းလိုးသလို သီဟကလည်း မမဇူးဖင်ကို ချနေသည်။ အန်တီသင်းနဲ့ မမဇူးကတော့ တစ်ယောက်အဖုတ် တစ်ယောက် ယက်နေကြတာပေါ့ဗျာ။
“အိုး အားလားလား ကိုလင်းက သားထက် ကြီးတယ်။ အား ထိတယ် လိုးစမ်းကွယ် အန်တီ့ဖင်ကိုကွဲအောင် လိုးစမ်းပါ အူးးးး”
“ဟုတ်ပါ့ အမေရေ… မောင်လေးက ကိုလင်းထက် ပိုရှည်တယ်… တစ်ယောက်တစ်မျိုး ကောင်းတယ် အား ဟားး လိုးမောင်လေး မမဖင် ပြဲအောင်လိုး”
အန်တီဖင်နဲ့ အဖုတ်ကိုလိုးလိုက် လီးကျွတ်ထွက်လာရင် မမဇူးကို စုပ်ခိုင်းလိုက်နဲ့ အပေါက်သုံးပေါက်ကို လိုးနေမိသည်။ လေးယောက်ပူးပြီးလိုးရင်း ပြိုင်တူ ပြီးလိုက်ကြသည်။ ကျနော့် လရည်ကို အန်တီဖင်ဝမှာ ပန်းထုတ်လိုက်သလို သီဟကလည်း သူ့လရည်ကို မမဇူးအဖုတ်ပေါ် ပန်းထုတ်လိုက်သည်။
ကျနော်နဲ့ သီဟ နားနေတော့ အန်တီနဲ့ မမဇူးက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စုပ်ယက်နေကြသည်။ ကျနော်နဲ့ သီဟလည်း တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး လက်ဝါးခြင်း ရိုက်လိုက်ကြသည်။ ခဏနားပြီး ရေသောက် သေးပေါက် လုပ်ကြသည်။
“မမ ဒီတစ်ခါ နင်နားဦး ငါတို့ကို ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပေး ငါတို့ အမေ့ကို ညှပ်လိုးမလို့”
“အေး ကောင်းသားပဲ… အမေရေ လီးနှစ်ချောင်း စားရတော့မယ် အဖုတ်ပွတ်ထားတော့ ဟဲ့… ငါ လီးအရင် စုပ်ပေးမယ်လေ ပြီးမှ အမေ့ကို လိုးကြ… ရော့အမေ သမီးကို အရင်ရိုက်ပေး လီးနှစ်ချောင်းလုံးကို စုပ်မယ်”
မမဇူးက ကျနော်တို့ရှေ့ ဒူးထောက်ပြီး လီးနှစ်ချောင်းကို ဘယ်ညာကိုင်ကာ စုပ်သည်။ တောင်လာ တော့ နှစ်ချောင်းပူးပြီး မရ ရအောင် သူ့ပါးစပ်လေးနဲ့ ဝင်အောင် စုပ်သည်။ ကျနော်တို့လည်း ပါးစပ်ထဲ ဝင်သလောက် ထိုးထည့်သည်။ ကျနော့်အတွေးထဲ ပေါ်လာတာကတော့ မမဇူးကို လိုးတဲ့အခါ တစ်ပေါက်တည်းကို နှစ်ချောင်းပူးပြီး လိုးဖို့ပါပဲ။ သီဟလည်း ဒီလိုပဲ တွေးနေမယ်လို့ ထင်ပါသည်။
အန်တီသင်းကို မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းပြီး နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်ကာ ပေါင်တစ်ဖက်ကို မလိုက်သည်။ သီဟက မလဲအောင် ထိန်းပေးထားသည်။ ကျနော်ကတော့ နမ်းရင်း အဖုတ်ကြီးထဲ လီးထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ဝင်သွားတော့ အန်တီသင်းကို ချီမပြီး လိုးသည်။ ၁၀ ချက်လောက် ဆောင့်ပြီးတော့ နောက်ကနေ သီဟက အန်တီသင်း ဖင်ကို လိုးသည်။
ဖြည်းဖြည်းခြင်း သွင်းပြီး အဆုံးဝင်တော့မှ သူထုတ်ကိုယ်သွင်း လိုးကြသလို ပြိုင်တူ အသွင်းအထုတ်လည်း လိုးကြသည်။ မမဇူးကတော့ ဗီဒီယိုရိုက်ရင်း သူ့အဖုတ်ကို သူပွတ်နေသည်။ ကျနော်တို့လည်း လိုးရင်း ကုတင်ပေါ် တက်လိုက်ကြပြီး ကျနော်က အောက်ကနေ ပင့်လိုးသလို သီဟက အပေါ်က ဆောင့်လိုးသည်။ နေရာချိန်းပြီး ကျနော်က ဖင်ချသလို သီဟက အဖုတ်လိုးသည်။ တစ်ခါတစ်လေ မမဇူးက လီးတွေ ဆွဲထုတ်ပြီး စုပ်ပေးသေးသည်။
“သားတို့ရေ အမေပြီးပြီ အားးးး အီးးး… ဟိုအရွမကို လိုးပေးလိုက်ကြပါကွယ်”
“အမေ ဝပြီလား သမီးခံရတော့မှာပေါ့ အဟီး”
“အမေ မမလို လီးနှစ်ချောင်းပူးပြီး စုပ်ပေးနော်”
အန်တီသင်းက ကျနော်တို့ လီးတွေကို စုပ်ပြီး ဖုန်းကိုင်ကာ ရိုက်ပြန်သည်။ မမဇူးက ကျနော့်အပေါ်တက်ခွပြီး ဖင်းဝမှာ လီးတေ့ကာ ထိုင်ချသည်။ သီဟက အဖုတ်ကို တဖုန်းဖုန်း လိုးသည်။ ကျနော် မျက်လုံးမှိတ်ပြတော့ သဘောပေါက်ပြီး အဖုတ်ထဲမှ လီးကို ဆွဲထုတ်သည်။ ကျနော်က မမဇူးဖင်ကို မြှောက်ကာ ပင့်လိုးလိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ မမဇူး ဖင်ဝကို သီဟလီး လာတေ့ပြီး ထိုးသွင်းတော့သည်။
“အားးး အဟား အမေရေ သေပြီ ဖင်ပြဲပြီ… အားး ကျွတ် ကျွတ်… မသာလေးတွေ တစ်ပေါက်တည်း နှစ်ချောင်း မသွင်းနဲ့လေ..။ အား ဖင်းကွဲပြီ အား ဗြိ ဗြစ် ဘု”
“ကောင်းတယ် ရွစိန်မ… သားတို့ လိုးပစ် ပြဲပလေ့စေ အမေချုပ်ပေးမယ် အပ်နဲ့”
“နင်ပဲ ခုနက နှစ်ချောင်းပူး ကြိုက်တယ်ဆို”
ကျနော်နဲ့သီဟ တိုင်ပင်ကိုက်ပြီး မမဇူး ဖင်ကို လိုးကြသည်။ လီးချင်းပွတ်ပြီး ဖင်းချရတော့ အရသာကတစ်မျိုးထူးတယ်ဗျ။ ဖင်းကိုချသလို အဖုတ်လည်းမလွတ် နှစ်ချောင်းချည်း လိုးပစ်သည်။ မမဇူး ဖင်ရော အဖုတ်ပါ ကျယ်သွားမှာတော့ အမှန်ပဲဗျ။ ပြီးတော့ ဖင်ထဲပဲ လရည် ပန်းထုတ်လိုက်ကြသည်။ လိုးပြီးတော့ မမဇူး အပေါက်လေးတွေ ပွစိစိနဲ့ကျယ်ပြီး တော်တော်နဲ့ ပြန်မစိ။
အန်တီသင်းကို လိုးမယ်လုပ်တော့ နှစ်ချောင်းပူးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ဦးတဲ့လေ။ ညှပ်လိုးတာတောင် တော်တော် နာနေပါပြီတဲ့။ ကျနော်တို့ လေးယောက် တစ်ညနေလုံး လိုးလိုက်ကြတာ မိုးပါချုပ် ခြေကုန်လမ်းပန်းကိုကျရော။
အိမ်ရောက်တော့ အမေ့ကိုနမ်း ဖုန်းနဲ့ရိုက်လာတာတွေ ပြလိုက်သည်။ အမေ့နိုကိုစို့ရင်း အိပ်လိုက်တော့သည်။ အမေကတော့ ဖုန်းကြည့်ရင်း ကျနော့်လီးကို လာဆွနေသေးသည်။ ဆွလည်း မလိုးနိုင်ပါ။ ကျနော်လည်း အမေ့ အဖုတ်ကို နှိုက်ရင်း အိပ်မောကျသွားတော့သည်။
နောက်နေ့ကျ အမေက သီဟနဲ့လိုးဖို့ ပြောလာမှာတော့ အသေအချာပင် ဖြစ်သည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 16,861
← ကံနာလား ဝဋ်နာလား အချစ်က ခါးတယ်
ကျွန်တော့် မိန်းမ ကပ်ကိုး →